Xukuno isugu jira Xad iyo Tacziir oo maanta lagu fuliyay Degmada Huriwaa ee Magaalada Muqdisho. | Halganka Online
Xukuno isugu jira Xad iyo Tacziir oo maanta lagu fuliyay Degmada Huriwaa ee Magaalada Muqdisho.
Maxkamada Wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir ayaa maanta Degmada Huriwaa ee Magaalada Muqdisho xukuno isugu jira Xad iyo Tacziir ka fulisay laba qofood oo ku eedeeysnaa inay galeen khaladaad Sharci ah taas oo ay ku mutaysteen in lagu fuliyo xukunada maanta lagu riday.
Xukunka Koowaad ayaa waxaa lagu riday Gabar lagu magacaabo “Zaynab Yuusuf Faarax” oo 20 jir ah kadib markii lagu eedeeyay inay fal Zina ah ku kacday taas oo ay ka qiratay Maxkamada horteeda, waxaana lagu xukumay in lagu dhufto 100 karbaash maadaama aysan hore guur usoo marin iyo in mudo sanad ah laga musaafiriyo magaalada Muqdisho oo ah meesha ay khaladka Sharciga ah ku gashay.
Xukunka Labaad oo ahaa mid Tacziiir ah ayaa waxaa lagu riday nin lagu magacaabo “Cumar Murjaan Cumar” oo 33 jir ah, Ninkaas oo ku eedeeysnaa inuu gabadha hore loosoo sheegay ka Zinaystay balse wuu dafiray inuu arinkaas ku kacay, kadibna wax cadayn ama marqaati ah looma helin, sidaas daraadeed waxaa lagu xukumay 30 karbaash oo ah Tacziir uu ku mutaystay inuu gabadha la kali noqday “Khulwa” iyadoo aanay wax maxram u ah joogin.
Goobta Xukunka Sharciga ah lagu fuliyay oo ahayd Degmada Huriwaa gaar ahaan Xaafada Suuqa Xoolaha ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal shacabka halkaas ku dhaqan ah si ay Marqaati uga noqdaan Xukunka Allaah ee la fulinayo isla markaana wajiyadooda ay ka muuqatay sida ay ugu faraxsanyihiin xukunka Allah ee lafulinaayo.
Kadib markii ay Wilaayaat-ka Islaamiga ah ka hana-qaadeen Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa soo noolaaday Axkaamta Islaamiga ah ee sida cadaalada ah loogu dhaqayo dadka Muslimiinta ah iyadoo aan loo fiirinaynin Rag, Dumar, Masuul, Mujaahid, Shacab, mid awood leh iyo mid daciif ah, waana sababta Keentay Allaah Fadligiis in dhulku uu barwaaqo noqdo dadkuna ay helaan Nabadgelyo iyo kala dambayn aan weli hore usoo marin.
« Dagaallo Culus oo saaka ka qarxay deegaanka Karin Duleedka Galgala iyo Gaadiid dagaal oo laga Gubay Maleeshiyada Ash-haado ladirirka Labaxay PIS-tsa Faroole (Faah Faahin). Wararkii ugu dambeeyey dagaaladii ka dhacay KARIN Boosaaso.(FAAHFAAHIN). »